Sidee loo hubiyaa Diiwaanada Wadahadalka? - Ciyaar
Ma jeceshahay inaad wax badan ka ogaato waxyaabaha ku saabsan sheekada 'Twitch chats'?Hagaag, waan helnay dhabarkaaga.Wadahadalka 'Twitch chats' waa noocyada farriinta tooska ah ee 'Twitch', midkoodna waa Diiwaanka Chat. Dadka daawada durdurradaada waxay awoodi doonaan inay kuu soo diraan farriimo qoraal ah, adiguna waxaad awoodi doontaa inaad ku daawato iyaga oo gacan ka helaya Diiwaanka Wada-hadalka.
Hadda adiga ayay kuu noqon doontaa inaad ka dhigto iyaga dadweynaha intaad qulqulayso iyo haddii kale. Qaar badan oo ka mid ah wabiyayaashu waxay doortaan inay tusaan dadweynaha si ay u kordhiyaan hawlgelinta. In kasta oo qulqulaya marar badan, way ku adkaatay qulqulka inuu hubiyo dhammaan sheekooyinka ay dadku dirayaan. Iyada oo gacan laga helayo diiwaanada sheekaysiga, waxaad awoodi doontaa inaad dib u eegto mar dambe.
Marka waxaan diyaarinay qoraal kooban oo aan ku sharxeyno sida aad ku heli karto diiwaanada 'Twitch Chat' iyo sababta diiwaanka 'Twitch Chat' ay muhiim ugu yihiin kanaalkaaga.
Raadinta Inbadan Ciyaaraha Bilaashka ah ee Bilaashka ah? Ka hubi qaybtayada barta.
Gal koontadaada 'Twitch' adigoo gujinaya halkan oo u dhaqaaq dhinaca midig ee shaashadda, halkaas oo aad ka heli doontid Ikhtiyaariyada Kanaalka.
Halkan tallaabadan, waxaad u baahan tahay inaad gujiso Xulashada Kanaalka.
Hadda u gudub Chats, daaqad cusub ayaa furi doonta, tanina waxay ku tusi doontaa diiwaanada sheekaysiga ee koontadaada.
Maxay Tahay Inaad Daryeesho Ku Saabsan Diiwaanadaada Wadahadalka ah?
Jawaab celin:Waxaad awoodi doontaa inaad ogaato sida dadku ula macaamilaan waxyaabahaaga. Haddii kale iyo haddii kaleba way soo celin karaan. Marar badan dadku waxay bixin doonaan talooyin bilaash ah si loo hagaajiyo waxyaabahaaga oo ay kuu caawiyaan. Waxay sidoo kale kugula socodsiin karaan isbeddellada cusub ee ay durdurrada kale raacayaan.
La socodka faallooyinkaaga:Waxaad awood u yeelan doontaa inaad calaamadeyso farriin kasta oo wax u dhimaya kanaalkaaga. Had iyo jeer u oggolow dhaliil wax ku ool ah, laakiin waxaa jiri doona dad ay fikraddoodu kaa xanaajin karto. Ama waxaa jiri kara faallooyin aan habbooneyn oo aan ku habboonayn da'da dadka aad beegsanayso. Xaaladahaas oo kale, waa inaad calanka ka bixisaa faallooyinkaas ama aad la sheekeysataa qofka mas'uulka ka ah.
Ka-Qayb-galinta Mawduuca:Tirada diiwaangelinta sheekaysiga, waxaad go'aansan doontaa in waxyaabaha aad ka kooban tahay ay gaarayaan dadka iyo in kale. In daawadayaashu sii kordhayaan ama tiradoodu sii yaraanayso. Mawduuc-ka-hawlgalku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah wareeggaaga qulqulka hawada.
Si loo soo gabagabeeyo, Diiwaanada sheekaysiga 'Twitch' ayaa muhiim ah haddii aad rabto inaad ku kasbato aragtida daawadayaasha. Tani waxay si weyn u saameyn doontaa tayada durdurrada oo waxay heli doontaa taageerayaal badan.Waxaan rajeyneynaa inaad jeceshahay qoraalkeena gaaban ee fudud ee barta 'Twitch Chat Logs'. Hadday haa tahay, ka dib ku rid fikradahaaga qaybta faallooyinka ama wixii su'aalo ah ee la mid ah, si xor ah u dheji qaybta faallooyinka ee hoose.
Sidee loo Tiriyaa Account Snapchat ah?
Instagram DM ee kombuyuutarka - Sidee loo hubiyaa?
Ka akhri buugaagta kombuyuutarka adoo isticmaalaya Kindle Reader - Download Now
123movies hada waa gomovies si
$ 50 psn kaarka bilaash ah
barnaamijyada qulqulka filimada bilaashka ah
xbox free codes live ma tilmaamaan ma download
waxa ragga rabaan filim buuxa 123 filim